N'ikpeazụ, MacBook nke 12 nke anụ ọhịa ahụ dịkwa n'aka iFixit | Esi m mac
N'ikpeazụ, MacBook nke 12 nke anụ ọhịa ahụ dịkwa n'aka iFixit
Naanị ụnyaahụ disassembly ọhụrụ 4-anụ ọhịa 21k iMac site iFixit, ọ na-eme na nke a hapụrụ anyị ụfọdụ ezigbo nkọwa banyere ime ya na ndị ọzọ adịchaghị mma. Na nkenke, ihe kachasị mma banyere iMac ọhụrụ ahụ bụ nke ahụ niile na-na-na-modular ọzọ na usoro nke processor na RAMYa mere, n'ọdịniihu na mgbe niile n'aka "onye okacha mara" akụrụngwa enwere ike ịtọsasị ma dochie ekele maka eziokwu na anaghị ere ya na motherboard.
N'ihe banyere ndị ọhụrụ 12-anụ ọhịa MacBook na 13-anụ ọhịa MacBook Pro na Touch Bar, nke e gosipụtara na isi okwu ikpeazụ na Monday, June 5, mgbanwe ole na ole banyere ihe dị n'ime karịa ihe ọhụrụ ahụ n'ụdị ndị nhazi ka mma.
Ole na ole mgbanwe na MacBook Retina 12 ″
Na nke a, akụrụngwa anaghị agbanwe agbanwe ma ọlị maka mbipute gara aga nke Apple wepụtara. Nke a apụtaghị na enweghị mgbanwe na igwe na mgbakwunye na ịgbakwunye ndị nhazi ọhụrụ ahụ, dịka ọmụmaatụ ntakịrị mgbanwe na keyboard ebe ọ bụ na na nke a, ha na-arịgo usoro nru ububa nke abụọ dị ka iFixit.
Na usoro niile MacBook 12 nke anụ ọhịa ahụ bụ otu ihe ahụ n'ime, nke na-enye ya akara ikpeazụ nke 1 n'ime 10, na 10 bụ nhọrọ nrụzi kachasị mfe.
Ndị a ọhụrụ ụdị meghere iFixit, na-egosi na ihe nhazi ohuru, RAM na ebe nchekwa batara n’azu ha nke pụtara na ọ bụrụ na anyị ada ada, anyị ga-eche maka nrụzi dị oke ọnụ ma dịkwa mgbagwoju anya. Anyị na-ahapụ jikọta na iFixit ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ akụkụ ụfọdụ nke disassembly a, mana anyị emegoro gị n'ihu na ọ dị ka ihe anyị hụrụ na ụdị nke Apple MacBook gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » N'ikpeazụ, MacBook nke 12 nke anụ ọhịa ahụ dịkwa n'aka iFixit
Otu esi enweta ebe mbu nke uzo mkpirisi (aha otutu) na Mac
AirPods ga-ejikọ Apple TV na akpaghị aka na mbata nke tvOS 11